स्वास्थ्य पेजडा.अनुप बास्तोला लेख्नुहुन्छ- घरिघरि त लाग्छ, हामी उपचारमा खटेकै मान्छे ढल्यौं भने, के होला अवस्था? - स्वास्थ्य पेज डा.अनुप बास्तोला लेख्नुहुन्छ- घरिघरि त लाग्छ, हामी उपचारमा खटेकै मान्छे ढल्यौं भने, के होला अवस्था? - स्वास्थ्य पेज
डा.अनुप बास्तोला लेख्नुहुन्छ- घरिघरि त लाग्छ, हामी उपचारमा खटेकै मान्छे ढल्यौं भने, के होला अवस्था?
काठमाडौं, नेपालगन्ज लगायतका शहरमा अस्पतामा आइ.सि.यु बेड, भेन्टिलेटर लगायत पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । शैया अभावमा बिरामीहरुको बिचल्ली सुरु भएको छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरु बढ्दा अब अस्सिजनको समेत कमी हुन थालेको छ ।
अक्सिजन चाहिने बिरामी धेरै रहेको र यसको पुर्तिमा चुनौति थपिएको भन्ने कुरा बाहिर आएपछि अहिले नागरिक स्तरबाट अस्सिजनका लागि सहयोग संकलन सुरु भएको छ । राजधानीमा दिन प्रतिदिन संक्रमण पुष्टि हुनेहरु बढिरहेका छन् । चिकित्सहरुले लकडाउन गरेको संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रृया दिन थालेका छन् ।
कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचारमा निरन्तर लागिरहनुभएका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा कोभिड संयोजक डा अनुप बास्तोलाले सामाजिक सन्जाल मार्फत समय अनुकुल नभएको भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अपिल गर्नुभएको छ ।
अत्यावश्यक काम बाहेका घरबाहिर ननिस्कन भन्दै उहाँले सकेसम्म सुरक्षित रहने कोसिस गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुहुन्छ ।
विगत एक वर्षअघिदेखि कोभिडका बिरामी हेर्दा यति जटिल अवस्था भोग्नु परेन । अहिले, बिरामीमा सुधार हुने अनुपात पनि घट्दो छ । हामी एकदमै डरलाग्दो अवस्थाको सँघारमा छौं । घरिघरि त लाग्छ, हामी उपचारमा खटेकै मान्छे ढल्यौं भने, के होला अवस्था ?
तत्काल, कोरोना भाइरसको संक्रमणको फैलावट रोक्नु जरुरी छ । चेन ब्रेक नगरी हामीले सम्हालिने मौका पाउने छैनौं । अहिले आइसीयूमा जति सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसले समुदायमा कति संक्रमित निर्धक्क घुमिरहनु भएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।